Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo su,aal ka keenay Cida ay u xiran tahay Wadooyinka Muqdisho
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa su'aal ka keenay cidda ay u xiran yihiin waddooyinka Muqdisho, haddii uu Madaxweynuhu amar ku bixiyay in la furo.
"Ilaa hadda magaaladu sidii ayay ciriiri ugu jirtaa, cabashada shacabkana waa sii labo jibaarantay, Sida ku cad Qodobka 90aad, Farqadiisa (b, c) ee Dastuurka KMG, Madaxweynahu waa Taliyaha Guud ee Ciidammada Qalabka Sida. Wuxuuna magacaabaa Taliyeyaasha Ciidammada Heer Federaal xilkana waa ka qaadaa”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
"Haddaba hadii Madaxweynuhu amray in la furo wadooyinka xiran, waa su’aale: Yey u xiranyihiin wadooyinka magaalada Mogadishu ilaa hada? Hadiise Madaxweynuhu amar bixiyay maxay u fuli la’yihiin amaradiisu? Mise magaaladii Mogadishu ayaa labo Madaxweyne yeelatay oo jidadka la gooyay Dowlad kale ayaa ka talisa? "ayuu yiri Xildhibaanka.